Ukufudumeza ngesantya esiphezulu | Umatshini wokufudumeza ubushushu | izisombululo zokungenisa ubushushu
Ukufudumala kokubanjiswa kwamaxesha amaninzi
Yintoni ekubambisene ngayo?
Ukuqhelaniswa kwe-induction kusebenzisa ukufudumeza ngaphakathi ukuze kunyange ukubambelela kokubambelela. Ukwenziwa kweyona ndlela iphambili yokunyanga izinto zokuncamathelisa kunye nokutywina kwezinto zemoto ezinje ngeengcango, ii-hoods, ii-fenders, izibuko ezibonisa umva kunye noomazibuthe. Ukwenziwa kwakhona kuphilisa ukunamathela kumdibaniso wesinyithi kunye nekhabhoni yefibre-to-carbon fiber joints. Zimbini iintlobo eziphambili zokubopha izithuthi: spotbonding,
otshisa amacandelo amancinci ezinto zokudityaniswa; bonding-ring ngokupheleleyo, nto leyo shushu amalunga agqibeleleyo.
Iinkqubo ze-DAWEI zokudibanisa indawo yokubopha ziqinisekisa ukufakwa kwamandla ngokuchanekileyo kwipaneli nganye. Ubushushu obuncinci kwimimandla echaphazelekayo kunciphisa ubude beepaneli. Ukubotshwa akufuneki xa ubopha iipaneli zentsimbi, nto leyo inciphisa uxinzelelo kunye nokugqwetha. Iphaneli nganye ijongiwe ngombane ukuqinisekisa ukuba ukuphambuka kokufakwa kwamandla kungaphakathi kunyamezelo. Ngokudibanisa umsesane opheleleyo, ubungakanani obulinganayo-
yonke ikhoyili iyanciphisa imfuno yamakhoyili okugcina.
Induction yeyona ndlela ikhethiweyo yokudibanisa kumzi mveliso weemoto. Isetyenziswa ngokubanzi ukubopha intsimbi kunye nealuminium sheet sheet, ukungeniswa kuya kusanda kuqeshwa ukubophelela izinto ezingafunekiyo ezintsha kunye nezinto zekhabhoni. Ukuchithwa kusetyenziswa ukudibanisa imicu egobile, izihlangu eziqhekezayo kunye neemagnethi kumzi mveliso we-electrotechnical.
Isetyenziselwa izikhokelo, iileyili, iishelfu kunye neepaneli kwicandelo lezinto ezimhlophe.
I-DAWEI yoQeqesho yingcali yokunyanga ngokunyanga. Ngapha koko, sayila indawo yokunyanga.
Izixhobo esizihambisayo zisuka kumacandelo enkqubo nganye anje ngemithombo yamandla kunye neekhoyili, ukugqiba kunye nokuxhasa ngokupheleleyo izisombululo eziphambili.
iindidi FAQ tags ukudibana, Ukufudumala kokubanjiswa kwamaxesha amaninzi, yokubambisana, lokubambisa, inkqubo yokubambisa, Inkqubo yokubambisa iRF